आँपको कोया फाल्ने गर्नुभएको छ ? यसको फाइदा थाहा पाएपछि तपाईं चकित पर्नुहुनेछ ! « Sajha Page
आँपलाई फलको राजा यत्तिकै भनिएको होइन । गुलियो आँपको स्वादको बराबरीमा उत्रनु कुनै पनि फलका लागि सम्भव छैन । रसिलो आँप निकै स्वादिलो हुनुका साथै यसको कोया पनि स्वास्थ्यका लागि कुनै वरदानभन्दा कम छैन । आयुर्वेदका अनुसार आँपको रुखको प्रत्येक भाग निकै उपयोगी हुन्छन् – बिऊ, फूल, फल र बोक्रा । यस्तै, आज हामी तपाईंलाई आँपको कोयाको उपयोगीताका बारे जानकारी दिँदै छौं । आँपको कोयालाई पाउडर, तेल र बटरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
आँपको कोयाका फाइदा
१. कपाललाई चायाँमुक्तः
आँपको कोयाले तपाईंलाई कपालमा पर्ने चायाँबाट छुटकारा दिलाउँछ । आँपको कोयाबाट बनाइएको बटरलाई कपाललाई मुलायम र बाक्लो बनाउनका लागि प्रयोग गर्नुहोस् । यसलाई तपाईंले तोरीको तेलमा मिसाएर लगाउनुहोस् र केही दिनसम्म यत्तिकै छोडिदिनुहोस् । यसको प्रयोगले कपाल झरेर तालु हुने समस्या, चाँडै कपाल फुल्ने समस्या र चायाँबाट राहत प्रदान गर्छ ।
यस्तै, आँपको कोयाको तेल फ्याटी एसिड, मिनरल्स र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । यदि चाहनुहुन्छ भने यसको तेल घरमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ । आँपको कोयाभित्रको १०÷१२ वटा बियाँ निकालेर मज्जाले सुकाउनुहोस् । निकै मसिनो गरेर त्यसलाई कुट्नुहोस् र कपडाले छान्नुहोस् र नरिवलको तेलमा पकाउनुहोस् । यो मिश्रणलाई २५÷३० दिनसम्म नियमित रुपमा टाउकोमा लगाएर मालिस गर्नुहोस् । यसले कपाल झर्न रोक्छ र कालो पनि बनाउँछ ।
२. स्वस्थ मुस्कान, बलियो दाँतः
आँप रुखको हरियो पातलाई सुकाएर पिस्नुहोस् । आँपको कोयालाई मसिनो पारेर पिस्नुहोस् र दुबैलाई मिसाएर छान्नुहोस् । दैनिक यो पाउडरले दाँत माझ्दा दाँत सफा र बलियो हुन्छ । दाँतको दुखाई पनि टाढा राख्छ । दैनिक आँपको पातलाई केहीबेर चपाएर थुक्दा दाँत हल्लिने र रगत आउन बन्द हुन्छ ।
आँपको कोयाभित्रको बियाँलाई पिसेर बनाइएको पाउडरलाई दैनिक तीनपटक सेवन गर्दा झाडापखाला निको हुन्छ । आँपको बियाँलाई शितलमा सुकाउनुहोस् र त्यसलाई मसिनो पारेर पिस्नुहोस् । यसको १ –२ ग्राम पाउडरलाई महसँग खानुहोस् ।
मोटो व्यक्तिका लागि आँपको कोयाको पाउडर निकै फाइदाजनक मानिन्छ किनभने यसले तौल कम गर्न सहयोग गर्दछ । यसले तौल घटाउँछ, कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई कम गर्छ र रक्तसंचारलाई ठिक राख्छ ।
आँपको कोयाले रक्तसंचार वृद्धि गर्दछ जसका कारण कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा रगतमा चीनिको मात्रालाई कम गर्दछ ।
६. मुटुजन्य रोगः
आँपको बियाँको मध्यम प्रयोगले मुटुजन्य रोगलगायत हाइपर टेन्सनलाई कम गर्दछ । हाम्रो स्नायू प्रणाली मुटु र रक्तनलीसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो दैनिक आहारमा कम मात्रामा आँपको कोयाभित्रको भागलाई सम्मिलित गर्ने हो भने यसले मुटुरोग र उच्च रक्तचापको समस्यालाई टाढा राख्छ ।
७. स्वस्थ कपालः
आँपको बियाँको तेल फ्याटी एसिड, मिनरल्स र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । तपाईंको यसको तेललाई घरमा नै निकाल्न सक्नुहुन्छ ।
आँपको कोयाको बाहिरी भाग हटाउनुहोस् ।
यसलाई नरिवल, जैतुन, तेल र तोरीको तेलमा मिसाउनुहोस् ।
यसलाई ग्लासको जारमा राख्नुहोस् र एक हप्तासम्म घाममा राख्नुहोस् ।
यसो गर्दा कपाल, नरम, बाक्लो र मुलायम हुन्छ ।
८. स्वस्थ छालाः
आँपको बियाँलाई उत्कृष्ट मोइस्चुराइजरको रुपमा लिइन्छ । आँपको बियाँबाट जुन बटर निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई विभिन्न लोसनमा प्रयोग गरिन्छ । यसको बियाँबाट निकालिएको बटरलाई अनुहारमा लगाउँदा पनि चिपचिप हुने समस्या देखिँदैन ।
आँपको बियाँको बटर सुख्खा छालाको लागि बरदान सरह हो । आँखा, गालाको कोमल छालामा यो बटर लगाउँदा निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
१०. सुख्खा ओठः
तपाईंले आँपको बियाँको बटरलाई शत प्रतिशत प्राकृतिक लिप बामको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सुत्नुअघि फुटेको ओठमा यसको बटर लगाउनुहोस् । यसले ओठलाई नरम र मुलायम बनाउन सहयोग गर्दछ ।
११. महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तश्रावबाट जोगाउँछः
आँपको बियाँको चूर्णलाई दही र नुन मिसाएर खाँदा महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तश्रावबाट जोगाउँछ ।